Malunga nathi -Shijiazhuang Haitian Amino Acid Co., Ltd.
Umasifundisane wethu wemveliso wakhiwe ngokuhambelana nemigangatho ye-GMP, ngezixhobo zemveliso eziphambili, izixhobo zohlalutyo kunye nenkqubo yolawulo egqibeleleyo. Ifumene iziqinisekiso ezininzi kubandakanya nelayisensi yemveliso (i-SC), i-ISO22000, i-ISO 9001: i-2015, i-HACCP, iKosher, iHalal, njl. Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno ze-CP, i-USP, i-EP, i-BP, i-AJI, i-FCC kunye neminye imigangatho ekhethekileyo yabathengi abaphezulu.
Ukuze uqhubeke nokuphucula amandla okwenza izinto ezintsha, inkampani ibisoloko ithobela umbono wophuhliso "wemveliso, yokufunda kunye nophando". Iminyaka emininzi, igcine ukusebenzisana ngokusondeleyo kunye neeyunivesithi ezininzi kunye namaziko ophando lwenzululwazi, ihlala iphucula itekhnoloji yemveliso. Ii-Amino Acids zaseHaiti ziyaqhubeka nokwandisa utyalo-mali lwe-R & D, ukufaka intsholongwane eqhubekayo kwinkampani kunye nophuhliso.
Ukuthembela kumgangatho ophezulu wemveliso kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu, iimveliso zeamino acid zaseHaiti zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-80 nakwimimandla, kubandakanya iYurophu, iUnited States, iJapan, iKorea, njl.
I-amino acid yaseHaiti, Ukulwela ikhondo lezempilo lomntu.